Ndwendwela iHaninge -Iziganeko nezinto zokwenza eHaninge
Malunga nokutyelela haninge
Awuna ziganeko kuluhlu.
Fumanisa haninge Facebook
Umzobo womnatha eFrönäs, Gålö 28 May ngo-11 am
Bona, yenza kunye namava
I-Naturpasset kunye neCykelpasset-Phandle kwindalo kwaye uzame ukuqhelanisa
Funda ukuhamba ngesikhephe eDalarö
Ivenkile kunye nevenkile
Iibhokisi zenyama ezinenyama yendalo etyiweyo evela kwifama yaseTyresta
Indawo yokuhlala kunye nendawo yokuhlala
Ihotele ekumgangatho ophumeleleyo -Ukuhlala ubusuku ngakwindawo entle yaseRudan
Bhukisha isikhokelo eTyresta - Ukufa kuyaphila kwihlathi eliphambili
Ishishini elinomtsalane nelifikelelekayo kunye nehotele yosapho emamela iminqweno yakho kwaye ithathela ingqalelo iimfuno zakho. Ihotele inamalungelo apheleleyo kwaye ukhetha umxholo weminibar yakho. Isidlo sakusasa sibandakanyiwe. IVega Stadshotell ibekwe ngobuchule eHaninge phakathi kweVega kunye neHenen ecaleni kwendlela 73. Apha ikufuphi neSödertörn entle, kumachibi nasentlango kwaye ikufutshane nakwezinye iivenkile ezinkulu zaseSweden nakwiivenkile zesebe. Kulula ukumisa kufutshane neStockholm kwindlela eya eGotland, kumazwe aseBaltic nasePoland. Ifowuni: 08-777 22 91, i-imeyile: info@vegastadshotell.se
Indawo yewebhu Ikhadi
KwiHemviken entle uya kufumana uSmådalarö aye kwiihotele nakwinkomfa. Apha uphumla okanye uzonwabise ngomnye wemisebenzi emininzi ekhoyo. Indlu yendlu yakhiwa ngo-1810 njengendawo yokutyela kunye nendawo yeqela lomnini wokuqala. Esona sakhiwo siphambili sele songezwa ipiyano enkulu ehotele, igumbi lokutyela kunye neorenji. Nokuba uza apha ngesikhephe okanye ngemoto, nokuba uhlala ubusuku okanye emini, ungonwabela ukutya okuphekwe kakuhle, uhlala unesihloko seziqithi kwindawo ecocekileyo nekhaya. Umbono oqaqambileyo wolwandle uqinisekisiwe ukuphucula amava.
Ifama yosapho ephilayo, i-1km eGålö. Kwindawo yokwakha amaplanga yokwenene, yivenkile yethu esefama kunye nevenkile esefama, apho sithengisa khona inyama evela kwizilwanyana zethu, inyama yenkomo neyemvana. Sithengisa neeshizi ezenziwe ngobisi lwethu kunye nentlanzi, ubusi njl. Unyaka wonke wamkelekile ukuba ubukele / ufuye / ugone zonke izilwanyana zethu ukusuka kwimivundla emincinci ukuya kumathole aphakathi kunye neenkomo / amahashe amakhulu. Usapho lakwaBorg luyakwamkela
IBlue Zense Yoga kunye noQeqesho
Sinikezela ngemisebenzi eyahlukeneyo kwiyoga kunye noqeqesho lomntu kokubini emanzini nasemhlabeni kwindawo yeziqithi ezikufutshane nolwandle eDalarö nakwimimandla ejikelezileyo. Ukuhamba ngenkxaso-mali iRyttarform, sinikezela ngoqeqesho olulungiselelwe kunye neyoga kuwe okhweleyo kwaye ufuna ukungena kweyona fomu yakho yokukhwela. Ukusukela embindini kaJuni kuye embindini ka-Agasti, sikwaneeshedyuli zasehlotyeni ezineeklasi eziqhelekileyo kwi-SUP (Yima ePaddleboard) Paddling, SUP Yoga kunye ne-SUP Fys e-Askfatshamnen Dalarö. Ukuhamba ngeDalarö Surf Point, sinikezela ngezifundo zomoya kunye nokuqasha iibhodi ze-SUP ngekayaking yakho. Sikwacwangcisa imisebenzi kunye neziganeko ngokwesicelo
Kwi-archipelago esemazantsi eHaninge, eneHårsfjärden ngasentshona kunye nebheyi enkulu iMysingen engaphandle ejongene nolwandle, ilele iMuskö. Apha, umkhosi waselwandle waseSweden wawunesiseko saso esiphambili ukusukela kwinkulungwane ye-1500 ukuya ku-1967. Isiseko esikhulu somkhosi waselwandle esihlala njengendawo enkulu njengeDolophu eNdala eStockholm siqhushumbele eliweni. Ngama-1960, kwakhiwa itonela phakathi kweMuskö kunye nomhlaba omkhulu. Itonela yemoto iphantse ibe ziikhilomitha ezi-3 ubude kwaye ibaleka nzulu njengeemitha ezingama-66 ngezantsi kwebheyi. EMuskö kukho iindawo ezimbini zokuhlala ezinkulu ukusuka ngenkulungwane ye-1700, iArbottna kunye neLudvigsberg.
IHaninge iyakhula kwaye kungoku nje inani elikhulu lamakhaya kunye nesikhululo sebhasi esitsha sakhiwa ecaleni kwesikhululo sikaloliwe sabahambi. Kumbindi wesixeko saseHaninge, kukho ukhetho olukhulu lwemisebenzi kunye nokuthenga. Kufuphi neziko laseHaninge yindawo engaphandle iRudan, ekwangumboniso wendalo. Apha unokuqubha, ukuloba iintlanzi ezixabisekileyo, ukunyuka okukhubazekayo, ukugijima kunye nebhayisikili yeentaba okanye usebenze kwindawo yokuzivocavoca yangaphandle. Ebusika, le ndawo ityelelwe kakuhle ngabatyibilika emkhenkceni kunye nabatyibilizi. Kwindlu yenkcubeko yaseHaninge uya kufumana imiboniso kwigalari yezobugcisa kunye nemisebenzi yabancinci nabadala kunye nethala leencwadi eligcweleyo.
Kwivaranda kaSeglarbaren unayo ipasile yokuqala yokungena konke ukungena kwizibuko. Apha ungatya izitya ezilula, usele ikofu okanye uphole ngebhiya ebandayo. Ukuba unabantwana kunye nawe, kukho ibala lokudlala kufutshane. Ikhosi encinci yegalufa, ibala lebhola kunye nenkundla yevolibholi ikwimeko elandelayo yeBhayi yokuLwandle. Ivula iveki yehlobo. Ungabhaliselwa kwimisitho yeqela ukusukela ngoMeyi ukuya kuSeptemba.
Inkomfa yeAlmsa / iSvartkrogen
ISvartkrog yokuqala yaseSweden, ebekwe kakuhle eHaninge kanye ecaleni kolwandle. EAlmasa, unokukhetha isidlo sangokuhlwa kwihlabathi elinomtsalane leSvartkrogen, ekumemela kumava angalibalekiyo kubumnyama obupheleleyo. Ebumnyameni, uvakalelo luvuselelekile, ukongeza kwisidlo ebumnyameni obupheleleyo, amava amaninzi amnandi alindileyo apho ukuva, incasa, ivumba kunye nokuchukumisa kudlala indima ebalulekileyo. Ubumnandi bokupheka obunamava amatsha. Sinxibelelana njani ngaphandle konxibelelwano ngamehlo? Amava awomeleleyo nawakhunjulwayo kunye nemilinganiselo emininzi emitsha. Wamkelekile kumava aqaqambileyo ebumnyameni obupheleleyo!
I-SkiMarine & "Ndikhwele intambo nje"
Iziko lezemidlalo lamanzi emazantsi eHaninge / Runsten eneevenkile, ikhefi kunye nenkomfa, ecaleni kwalo lichibi lethu elitsha elimbiwa ngemoto yentambo yombane yokutyibilika emanzini, ukuvuka ebhodini kunye nokuguqa ngamadolo. Unako kwakhona ukubhexa i-SUP, ukuqubha okanye uphumle nje. Indawo yemidlalo yamanzi ehambelana nombane kunye nokusingqongileyo enokuthelekiswa nokuphakanyiswa kweskiya emanzini, ucingo lujikeleza ngesangqa kwiinqaba ezi-5 malunga nobude beemitha ezili-10 kwaye intambo / isibambo se-skier siqhagamshelwe rhoqo apho ungaya khona emanzini ukuskiya, ukukhwela ebhodini okanye ukubhobhola. Ipaki ivulelekile kubo bonke ubudala, abaqalayo kunye nabaphambili. Ukukwazi ukuqubha kuyimfuneko.
Ihostele ephethwe lusapho kunye nolunye undwendwe olwahlukileyo. Sivulekile unyaka wonke kwaye sinikezela ngendawo yokuhlala entle kwindalo entle elizweni nje imizuzu engama-25 ukusuka kwisixeko saseStockholm ngemoto. Izindlu zisekupheleni kwehlathi kunye negalufa kunye nezolimo njengabamelwane abasondeleyo. Apha uya kufumana uxolo!
IPORT 73 yindawo yokurhweba eHaninge ebekwe ecaleni kweRiksväg 73, embindini wehabhu yezithuthi edibanisa iHaninge, iTyresö neNyäshamn. Apha unokufumana uninzi lwezinto ozifunayo, ikhemesti, ukutya, ifashoni, ulonwabo, izindlu kunye namakhaya phantsi kophahla olunye. Indawo yethu yokuthenga yindawo ekhuselekileyo, emnandi nenobuhlobo yokuba abantu bahlangane batye kunye nokuthenga. Wamkelekile eBhayi 73.
I-Hembygdsföreningen kunye nathi eGålö ibizwa ngokuba yiGålö Gärsar Hembygdsförening. Sisebenzela ukugcina imbali kaGålö iphila, ukuba iGålö kufuneka ibe yindawo esebenzayo yabahlali kunye neenkampani ezincinci ukwenza unxibelelwano oluhle phakathi kwabahlali.Kutheni igama elithi Gärsar? Igwele yintlanzi. Mandulo, abantu abaselula kwesi siqithi babebizwa ngokuba yiGärsar, ngokwahlukileyo kulutsha olwalubizwa ngokuba ngooNomyayi. IGålö Gärsar yasekwa ngo-1984. Ukusukela ngo-2004 siye saba neendawo zethu zokuhlala apha kwifama yaseMorarna. Sinemisebenzi emininzi eyahlukeneyo ngaphakathi kombutho ..
Imizuzu nje engama-25 ukusuka eStockholm, entle kwaye ibekwe ngokungenanto. Inqaba ukusuka ngenkulungwane ye-1600 ikhumbuza ixesha elidlulileyo lobungangamsha kunye nobutyebi. Isixeko esikhulu siziva sisekude xa uhamba kwiindawo ezinkulu, ecaleni kolwandle kunye nendawo enkulu yendalo. IHäringe yindoda yangaphambili. Esona sakhiwo siphambili sakhiwa nge-Gustaf Horn saza sagqitywa ngo-1657. IHäringe Castle inabanini abaziwayo abaliqela, phakathi kwabo uGustav II Adolf, Fabian Löwen, Torsten Kreuger, Axel Wenner-Gren no-Olle Hartwig. IHäringe ibonelela ngamathuba epati, indawo yokuhlala, iinkomfa kunye nemisebenzi yosapho lonke.
KwiHemviken entle uyakufumana iSmådalarö Krog entsha - iBrasserie kunye neBrnneri. Apha utya ukutya okuhle, okuphekwe kakuhle apho imenyu ibonelela ngezitya zobhedu zakudala ezinento ecacileyo evela elwandle. Zive ukhululekile ukuzama ibranti yokutyela, "iKaptenens Droppar" - ischnapps enencasa emnandi kunye nembeko kwimbali yefama.
Ifama yosapho ephilayo, i-1km ukuya eGål kunye neenkomo zobisi ezingama-40 kunye nezilwanyana ezimalunga nama-80 ezigcina amadlelo amnandi e-oki evulekile. Iziqithi ezityisa iigusha kwisiqithi esihle saseStockholm. Kwiyadi kukho ikhefi kunye nesikolo esahlukileyo sokukhwela kuzo zombini ezinkulu nezincinci, ukusuka kwiminyaka emi-2 ukuya komdala. Sinezifundo ezide apho ukudibana nehashe kubalulekile. Sisoloko singaphandle kwaye sisebenzisa indalo ukuze sifunde ukukhwela. Ngexesha leesemester sinezikolo zokukhwela apho uninzi lwabantu lukhwela rhoqo ngeveki, ehlotyeni nangeeholide sineenkampu ezihamba kakuhle.
IDalarö yindawo eyi-idyll egcinwe kakuhle engama-40 km ukusuka eStockholm C. Nazi izindlu ezonwabileyo zomchweli kunye nezitrato ezinamajikojiko ezimxinwa. Ndwendwela iTullhuset ngeofisi yabakhenkethi, imyuziyam, indawo yokutyela kunye nebar. Kumanzi asuka eDalarö - kwindawo yokugcina inkcubeko yaselwandle eSweden - zezona ndawo zonakeleyo zomthi ezigcinwe kakuhle ukusukela kwinkulungwane ye-1600. Elalini kukho iivenkile kunye neevenkile. Wamkelekile eDalarö-vula unyaka wonke-ngemozulu entle yeStockholm.
Izinto zakudala. I-retro, uyilo, ukuthanda ukwazi kunye neemarike zentambo Izinto ezintsha veki nganye. Vula: NgoLwesithathu-Lwesine 12-18 NgoMgqibelo-NgeCawa 11-16 Ukwamkelwa ngokufudumeleyo kuVega Antiklada, (Gamla) Nynäsvägen 3, ubulisa uCristina Taccola. Ifowuni: 0725 191963, i-imeyile: vegaantikladan@hotmail.com
Embindini weSödertörn entle yiFors Gård yokuthandana kwiViking Age. Sivulekile unyaka wonke ngezikolo zokukhwela, ukukhwela ngaphandle kunye nezifundo zabucala kumahashe ethu eIceland, nakwabagibeli abanamava kwizifundo zehashe laseLusitano. Silungiselela iinkomfa, ukukhaba kunye namaqela abatshatileyo ngokudibana kwehashe ngokweminqweno. Ifama inezakhiwo ezininzi ezinembali. Indawo yokugaya endala ejongene nee-rapids nayo ibinesarha kwaye kwiindawo zokuhlala ezindala ezihlala abantu abasebenza efama. Wamkelekile ukuba utsalele umnxeba ku-08-500 107 89 okanye usithumele i-imeyile kwi-b bokningen.forsgard@telia.com
Abahlali besi siqithi bapela iKymendö ngo "m" kwaye bayibize "Tjymmendö". Umhlali waseViking Age ogama linguTjudmund inokuba nguye owanika igama lesiqithi. Umbhali u-August Strindberg waqesha indawo yokuhlala ehlotyeni apha ehlotyeni aliqela pha kwii-1870s nakwincwadi yakhe yenoveli uHemsöborna ubonakalisa abantu kunye nemimandla yeziqithi esiqithini. Namhlanje, iWaxholmsbåt iya eKymendö isuka eDalarö nakwihlobo lasehlotyeni ukuya eStrömkajen eStockholm.
EHaninge, unokuhlala kamnandi ehotele embindini wedolophu okanye njengobunewunewu kwiinqaba, iihotele kunye neeyadi zekhosi ezilalini nasemaphandleni. Wena ofuna ukuphila ngokulula unokurenta indlu yokuhlala kwiziqithi.
Almåsa, Brandbergen Bio Cosmopolite, Dalarö, Fjärdlång indawo yokugcina indalo, Gålö indalo, Haninge C, Huvudskärsarkipelagen, Häringe castle, Jordbro, Kymendö, Muskö, Nåttarö, Ornö, Rånö, Sandemardaladala park, National Park ipaki, Ålö, Årsta castle, Öster- kunye neVästerhaninge
I-Copyright 2022 © Izihloko ze-UX
Iphasiwedi iya kuthunyelwa kwidilesi ye-imeyile.
Iinkcukacha zakho ziya kusetyenziselwa ukuphucula amava akho kwiwebhusayithi, ukulawula ukufikelela kwiakhawunti yakho kunye nezinye iinjongo ezichazwe kuthi umthetho wabucala.